Realme X50 Pro 5G bụzi gọọmentị. Nkọwa na ọnụahịa nke ọhụụ ọhụrụ Realme | Gam akporosis
Realme bịara n'ahịa n'afọ gara aga na usoro nke ọnụahịa nwere uru karịrị ego na-adọrọ mmasị ma nke ahụ mere ka ụlọ ọrụ ahụ gbanwee Realme X2 Pro n'ime otu n'ime smartphones kachasị ere site na Amazon, ọwa mmiri na-ekesa ya n'ọtụtụ mba, gụnyere Spain.
Betlọ nzọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ India Realme maka oke dị elu, anyị na-ahụ ya na X50 Pro, ọnụ ahịa ahụ naanị dị na ụdị 5G, ya mere ọnụahịa ya karịrị 100 euro dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere X2 Pro nke ọ malitere n'afọ gara aga, nke nwere ike ịbụ nkwarụ maka ọtụtụ ndị ọrụ tụkwasịrị ụlọ ọrụ ahụ afọ gara aga.
Imejuputa modem 5G bu ihe mmụba ọnụahịa na-eru nso 100 euro,, dị ka anyị hụworo na ndị nrụpụta niile na-ebupụta ụdị dakọtara na netwọkụ a. Samsung bụ naanị onye nrụpụta na-enye nsụgharị 4G na 5G, nke ikpeazụ bụ 100 euro dị oke ọnụ.
Realme X50 Pro nkọwa
Ihuenyo 6.44-inch Super AMOLED - 90 Hz - Mkpebi FullHD - HDR10 +
Eserese Adreno 650
Nchekwa 128 / 256 / 512 GB
Igwefoto azụ 64 mp obosara (20x zoom ngwakọ) - 8 mp ultra wide wide - 12 mpx telephoto - oghere ojii na ọcha maka eserese
Igwe foto dị n'ihu 32 mpx f / 2.5 - 8 mpx ultra wide akụkụ f / 2.2
Batrị 4.200 mAh
A gam akporo Android 10 nwere akwa idozi Realme UI
Akụkụ 158.9 × 74.2 × 9.3 mm
Ibu ibu 207 grams
Ahịa Site na euro 599
N'ime Realme X50 Pro anyị na-ahụ ihe nhazi ahụ Qualcomm Snapdragon 865 tinyere 8/12 GB nke RAM. Ebe nchekwa ahụ dịkwa na ụdị atọ nke 128, 256 na 512 GB. Igwefoto nwere mebere anya anọ:
64 mp obosara (20x ngwakọ mbugharị)
8 mp ultra sara mbara
12 mpx telephoto
Anya ojii na nke ọcha maka eserese
Batrị ahụ ruru 4.200 mAh ma kụọ ahịa na Eprel maka 599 euro maka isi ihe nlereanya na 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa. Versiondị nke nwere 256 GB nke nchekwa na 8 GB nke RAM na-aga euro 669 na ụdị ahụ nwere 12 GB nke RAM na 512 GB nke nchekwa na-aga euro 749.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Realme X50 Pro 5G bụzi gọọmentị. Nkọwa na ọnụahịa nke Realme ọhụrụ dị elu
Samsung Galaxy M31 bụ onye ọrụ: Igwefoto anọ na batrị 6.000 mAh